Iphephile iMahindra XUV 300
Thokozani Ndlovu | April 19, 2022
IMOTO: MAHINDRA XUV300
UMA kukhulunywa ngezokuphepha angiyingabazi nakancane iMahindra XUV 300 esithuthukisiwe.
Cishe ikuphethe konke okudingeka emotweni ukuqinisekisa ukuphepha kwakho uma uhamba ngayo. Ngesikhathi ngihamba ngayo njengoba bekwethulwa eyalo nyaka, kungicacele ukuthi kungani ihambe phambili ngezokuphepha kwi-Global New Car Assessment Programme (GNCAP) ngo-2020.
Inama-Airbags ayisikhombisa okuhlanganisa nawasemadolweni, nawasemaceleni, tyre pressure monitor ekhombisa ukwehla kwethayi nezinga lokushisa, Electronic Stability Program, ISOFIX okuyindawo yokufasa isihlalo sengane, amafog lights ngaphambili nangemuva, amasensa angaphambili uma upaka, ABS and Electronic Brakeforce Distribution (EBD) iphinde ibe namadisk brakes kuwona womane amasondo.
Kukhona iW4, W4 SE, W6 bese kuba esezingeni eliphezulu okuyiW8.
Ngaphandle ayishintshile kodwa kushintshwe ingaphakathi layo njengoba enezihlalo zendwangu sezimnyama bese kuba ezesikhumba ezimnyama. AbakwaMahindra bathe basabele ikhwelo lamakhasimende abo akhale ngezihlalo ezinemibala egqamile ngenxa yokungcola. Kuphinde kwakhushulwa nescreen se-infotainment njengoba sesingu-9 inch, sisuka ku-7 inch.
Okungangichazanga ukuthi ayikho enogearbox oyi-automatic kodwa iyimanual enamagiya angu-6 kodwa kwi-W6 ikhona icruise control futhi uyakwazi ukuyengeza kwezinye izinhlobo.
Cishe izokwazi ukubanga nezimbangi zayo okuyiCherry Tiggo 4 Pro neHaval Jolion ezibukeka zenza kahle amakethe ngokudayisa.
Emgwaqweni ithule futhi kumnandi ukuhamba ngayo njengoba intofontofo. Izibuko zayo ezisemaceleni zinkulu ngokwanele ukubuka imoto eza eceleni.
Kwi-W4 SE, W6 ne-W8 iphuma ne-Apple CarPlay ne-Android Auto. I-W8 iphinde ibe ne-sunroof engekho kulezi ezinye.
Uyakwazi ukuvika ukuthi uxhoshwe noma uxhophe ezinye izimoto ngamalambu ebusuku njengoba ine-self-dimming rear-view mirror, automatic headlamps iphinde ibe nama-wipers azisukelayo uma kuqala imvula.
Injini kukhona eka-phethroli nekadizili ngaphandle kwe-W4 esebenzisa uphethroli kuphela. Ngobukhulu bayo injini kukhona i-1.2-litre turbocharged petrol enama-cylinder amathathu afuqa u-81kW no-200Nm. Kwekadizili enama-cylinder amane kukhona engu-1.5 litre turbocharged efuqa u-86kW no-300Nm.
Indlela okwengezwe ngayo ezokuphepha ungaze uzitshele ukuthi nentengo aphezulu kanti lutho.
Mahindra XUV300 1.2T W4 - R234 999
Mahindra XUV300 1.2T W4 SE - R244 999
Mahindra XUV300 1.2T W6 - R261 999
Mahindra XUV300 1.5TD W6 - R281 999
Mahindra XUV300 1.2T W8 - R316 999
Mahindra XUV300 1.5TD W8 - 336 999
Kuzona zonke izinhlobo ziphuma ne-warranty yeminyaka emihlanu noma amakhilomitha angu-150 000 neminyaka emithathu noma u-50 000 wamakhilomitha kwiService Plan.